AMISOM oo war kasoo saartay duqeymo Ciidanka Kenya ka geysteen Gedo (Akhriso) – Idil News
AMISOM oo war kasoo saartay duqeymo Ciidanka Kenya ka geysteen Gedo (Akhriso)
Bayaan ka soo baxay howlaglka Midowga Afrika ee AIMSOM ayaa lagu shaaciyey in AMISOM ay baareyso xaqiiqda eedeymaha ay dowlada Soomaaliya u soo jeedisay dowlada Kenya ee ah in ciidamadeeda ay duqeysay deegaano ka mid ah gobolka Gedo.
Wasaarada Arrimaha Dibbada ee dowlada Soomaaliya ayaa qoraal ka soo baxay waxaa lagu sheegay in ciidamada Kenya ay duqeyn ka geysteen gobolka Gedo oo dad rayid ah ay ku dhinteen.
“Howlgalka ayaa hadda ku howlan aruurinta macluumaadka ku saabsan shilka la soo sheegey, waxaana si dhow ula shaqeyn doonaa Dowladda Federaalka Soomaaliya, Wasaarada Arimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga iyo dhammaan daneeyayaasha kale oo ay khuseyso inta aan baareyno arintaan,” ayaa lagu yiri bayaanka AMISOM.
Sidoo kale qoraalkan waxaa lagu sheegay in AMISOM ay waajib ku tahay inay si habsami leh ugu fuliso howlaheeda loo igmaday ee Soomaaliya, si waafaqsan asluubta, iyadoo la raacayo dhammaan sharciyada caalamiga ah ee khuseeya howlgalka. “Sidaas darteed waxaa ka go’an inay baaraan dhammaan eedeymaha ku saabsan xad-gudubyada xuquuqda ka dhanka ah ee loo geysto rayidka.